ကျစ်လစ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator > ကျစ်လစ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
ကျစ်လစ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
AOX-P ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r ရှိ မြင့်သော အရည်အသွေး နှင့် ရှည်လျားသော ဘဝဖြစ်စဥ် သို့ တှေ့ဆုံ အဆိုပါ အခင်အရှင် auသို့mation market.AOX ပေးသွင်း အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး AOX-P ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ နှင့် မြင့်သော performance.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ထောက်ပံ့ သို့ အားလုံး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ client များ လှည့်ပတ် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီးကို။
Air ကိုပေးဝေရေးဖိအားပေးမှုနှစ်ချက်သရုပ်ဆောင်: 2-8Bar;
Openrating အပူချိန်နျ Standard: -20Â° C + 80Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator များအတွက် 1. လူမီနီယမ်ကခန္ဓာကိုယ်။
အဆိုပါ extruded ဆလင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်များနှင့်ပွတ်တိုက်၏ကိန်းကိုလျှော့ချဖို့ဒဏ်ငွေ machine socket နဲ့ Hard anodized ပြင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
actuator မွေးစားဖြစ်ပါတယ် AOX-P ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic များအတွက် integrated ဒီဇိုင်း။ တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် actuators နှင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် actuators အားလုံးသည်အမျိုးအစားအတူတူဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုံးဦးထုပ်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင် module ကိုအလွယ်တကူစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် demounting ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ပေါင်းလိုက်သောကြိုတင်ထည့်သွင်းထားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုနွေဦးတပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်နိုင် / လယ်ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်တပ်ဆင်သို့မဟုတ်ကာလအတွင်းကာလအတွင်းအလွယ်တကူနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာလျော့နည်းသွားသည်။
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအား AOX-P ကို၏ဆလင်ဒါကိုယ်တည်းထဲသို့ကြွလာ လေထုထဲကနေနှစ်ခု piston အကြားစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ဝင်ပေါက် (2) နှင့်ဆလင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း။ အဆိုပါ အဆိုပါ piston နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်းလေကြောင်းကနေဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ် ဝင်ပေါက် (4) ။ ဤအတောအတွင်း piston ၏ထိန်သိမ်းက output ရိုးတံကိုလှည့် anticlockwise (ဂီယာဘီး) တစ်ပြိုင်နက်တည်း, လေထုအရင်းအမြစ်ဖိအားလျှင်သော်လည်း လေဝင်ပေါက် (4) ကနေဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းသို့ကြွလာနှင့်တွန်း ဝေဟင်ကနေဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့ piston ဝင်ပေါက် (2), က output ရိုးတံ (ဂီယာဘီး) ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း piston လက်ယာရစ်လှည့်ရန်။ (ထို piston အတွက်စုဝေးနေလျှင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်, ထို output ကိုရိုးတံကိုလှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ် ပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်အတွက်အမည်ရနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် DLtype reverse)
1 ။ ကျနော်တို့ကပြည့်စုံထုတ်ကုန်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသေချာစေရန်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းမှုစနစ် သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator တိုင်းကုန်ထုတ်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ဇာတ်စင်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံရှိ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator မတိုင်မီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ် စက်ရုံစွန့်ခွာ။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
3. အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, အသေးစားကိုလက်ခံ အမိန့်, အမိန့်တုံ့ပြန်မှုလျင်မြန်စွာ, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်မီအာရုံစိုက်, လျင်မြန်စွာဖောက်သည်လည်းသင်္ဘောမှရှေးခယျြနိုငျ UPS, DHL, TNT, မှတဆင့်တင်ပို့ရနိုင် ပင်လယ်, လေနှင့်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
သေးငယ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
သေးငယ်သော နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator